Neila Charchour Hachicha : Blaogy Ho An’ny Fahafahan’Ireo Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2017 12:35 GMT
Raha iny ao ampiomana hanatanteraka ny fihaonambe faharoa iny ny World Summit on the Information Society (WSIS) (Fihaonambe Faratampon'ny Orinasa Mpikirakira Torohay), izay hotanterahina ao Tunis ny volana Novambra 2005, manao izay ho afany ireo Toniziana blaogera hisintonana ny sain'ny maro amin'ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ao Tonizia. Naharay imailaka iray avy amin'ilay Toniziana mafana fo amin'ny politika Neila Charchour Hachicha ny Global voices dia :
Miezaka mandrakariva aho manangana ny PLM na ny Mediterranean Liberal Party (Antoko Liberaly Mediteraneana ) mba hanampiana ny fametrahana ny demokrasia ao amin'ny fireneko. Ny hany fitaovana ampiasaiko dia ny Tranokalam-pifandraisan'ny PLM sy ny Blaogiko manokana izay samy voasivana ao Tonizia.
Aty, miaina ambany jadona tsy hita maso izahay, voalohany indrindra satria miankina betsaka amin'ny fizahantany ny toekarenay ary ilain'ny fitondràna ny mampiseho endrika tsaran'ny firenena, ary faharoa satria ny fitondràna efa hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena no efa matihanina amin'ny famoretana ny vahoakany ary koa amin'ny fandaingalaingana amin'ny vondrona iraisampirenena.
Koa raha mitsidika an'i Tonizia ianao, na mitsidika olontsotra monina ao Tonizia, dia hahita firenena iray tena mahafinaritra izay maha-te-honina sy misy fivoarana ara-toekarena azo tsapain-tanana. Mila miditra anaty politika mihitsy ianao hahafahanao mahita ny zava-misy marina ambadiky ny lampihazo, zavatra tsy maha-tonga saina ny ankamaroan'ny mponina akory.
Taorian'ny fitondràna fanavaozana maro, lasa lalàm-panorenana voatefy hiasa ho an'ny fahefan'ny antoko eo amin'ny fitondrana misy ankehitriny sy ny Filohany izay sady Filohan'ny Repoblika manana ny fahefana rehetra azo omen'izany andraikitra izany azy. Mifampiankina ny zava-drehetra ary mazava ho azy fa mifanompo amin'ny alàlan'ny kolikoly avokoa.
Anananay ny karazana lalàna rehetra fameperana sy fanararaotana izay tsy mamela fotsiny izao ny dingana demokratika, na inona na inona, hitombo tsy misy filaniàna sy an-kalalahana. Ambonin'izany, na ny fitondrana misy aza tsy manaja akory ny lalàna. Ny famoretana no fitaovana tena tian'ny fitondrana ho an'ireo tsy mitovy hevitra aminy, na izany ireo mitsipaka marin-drano, ireo tonitony fihetsika na ireo izay anatin'ny antoko mpanohitra ara-dalàna sy eken'ny fitondrana izay natsangan'izy ireo mba hanehoana amin'ny vondrona iraisampirenena fa manao izay ho afany izy ireo hampanjariana ny demokrasia.
Ny tena marina, tsy manana fahalalahana hanana fikambanana izany izahay ary tsy misy fikambanana antoko politika mahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana izany. Io fahazoandalàna io dia tsy hoe zo fototra azonao ampiasaina an-kalalahana; fa fankasitrahana manokana atolotry ny fitondrana ho an'ireo izay manindrahindra azy. Ilàna fahazoandalàna avy amin'ny fanjakana ny fivoriana olona telo na mihoatra.
Mazava ho azy, voafehin'ny fitondrana tanteraka ny vaovao mivoaka ary tsy misy ny fahalalahana maneho hevitra no sady tena mahavoasazy tokoa raha toa ka mitranga izany. Ny sazy rehetra dia tsy natao ho an'ilay mpikatroka irery ihany fa afaka mihatra amin'ny fianakaviany ihany koa.Tsy misy sazy mifandray mivantana amin'ilay hetsika nataonao iny fa izay zavatra rehetra tsy ara-dalàna hitany. Mora amin'izy ireo ny mahita zavatra tsy ara-dalàna eo amin'ny fiainanao satria matetika ny lalàna no manararaotra amin'io resaka io.
Raha ny marina, ny hany varavarankelim-pahafahana ho anay dia ny filazambaovao avy any ivelany rehefa mba manome sehatra ho anay ry zareo,na ny aterineto, na voasivana avokoa aza ireo tranonkala politika sy mpiaro zon'olombelona ao Tonizia. Koa dia any ivelany na amin'ny alalan'ny ‘proxy’ manokana no ahafahana mamaky ny lahatsoratray.
Ireo tranga ireo no manazava ny antony tsy ahazoan'ny vahoaka Toniziana aina amin'ny resaka hetsika ara-politika ary ny fahanginana no lalàna fototra. Samy mampiaa io politikan'ny fahanginana io na ny fitondrana , na ireo mpikatroka mafana fo, kanefa na ho an'ny andaniny sy ny ankilany tsy vahaolana mety io fahanginana io. Tokony ho sahy haneho hevitra isika ary handrisika ny olona hanao toy izany koa hahafahana mametraka adihevitra ampahibemaso sy hanampy ny olona rehetra hanorina faharesen-dahatra sy ny heviny toy izay hoentin'izy ireo amin'ny sanga eo.
Miala tsiny aho raha toa ka amin'ny fiteny Frantsay avokoa ny tranonkalako rehetra, fa ny teknolojia no hanampy anareo handika izany ary manasa anareo hitsidika manokana ito pejy ito “Tunisian Citizen Wake Up” – Mifohaza ry Toniziana – (Fanamarihana: tsy mandeha intsony ity rohy ity) izay ahafantaranareo bebe kokoa mikasika ny zava-misy marina momba ny Politika Toniziana.
Manaraka izany, vondrona Toniziana mpikatroka mafàna fo ara-politika mipetraka any ivelany no namorona vao tsy ela akory izao ny Fikambanana iray hiarovana ireo Toniziana mpikatroka mafana fo ary hiarovana ny Fahalalahan'ny habaka anaty aterneto Toniziana.
Ahianay ilay WSIS, izay ho tanterahina ao Tonizia, ho vao mainka hitondra sivana maro sy famerana ny fahalalahana maneho hevitra.
Hamatsy lahatsoratra amin'ny teny Anglisy ho an'i Global Voices mikasika ny tontolon'ny Blaogy sy ny fahalalahana maneho hevitra ao Tonizia i Neila.